“နာမည်ပြောင်းဘို့ မလိုတဲ့နှင်း………………….(သူကြီးသို့ အိတ်မပါပေးစာ)” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » “နာမည်ပြောင်းဘို့ မလိုတဲ့နှင်း………………….(သူကြီးသို့ အိတ်မပါပေးစာ)”
“နာမည်ပြောင်းဘို့ မလိုတဲ့နှင်း………………….(သူကြီးသို့ အိတ်မပါပေးစာ)”
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Dec 10, 2011 in Drama, Essays.., My Dear Diary | 33 comments
ဟိုလွန်ခဲ့သောရက်များက ကျနော် နဲ့ တပ်မ77 တို့
တစ်ရက် မန်းလေးကန်တော်ကြီးက နှင်းမူံထဲက ကရိဝိတ်ပုံကိုတင်လိုက်တော့
သူက “နှင်းမဟုတ်ဘူး မြန်မာပြည်မှာ နှင်းမကျဘူး”လို့ရေးလာပါတယ်။
နိုင်ငံခြားကလူတွေရဲ့ snow က အတုံးအလိုက်အခဲလိုက် အဖတ်လိုက်ကြီးကျတာကိုးဗျ။
ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်က နှင်းလို့ သတ်မှတ်ထားတာကတော့ အဖြူရောင်တံတိုင်းလေး
အခု မမ ရဲ့ sweet December ပို့စ်ထဲမှာ သူကြီး က snow ကိုနာမည်အသစ်ပေးရအောင်
အဲတော့ ကျနော်လဲ နှင်းပါတဲ့စကားလုံးတွေကို လက်လှမ်းမှီသမျှ ကိုယ်အနီးမှာရှိတဲ့ရှေးစာအုပ်တေရှေွးကဗျာတွေထကရှာရတာပေါ့။
အဲဒီမှာဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ မြန်မာပြည်က နှင်းကျတဲ့ကာလက
မြန်မာလိုပြာသို ဘိုလိုဆိုရင် ဇန်န၀ါရီလမှာကျတယ်ဆိုတာသွားတွေ့ရပါဘဲ။
1.(ဆီးရည်ကျရွှမ်း တောတောင်မွှမ်းမျှ အလွမ်းဝေေ၀)
ရေးသူ န၀ဒေး အလွမ်းဝေေ၀ရတု သက္ကရာဇ် 920ခုနှစ်။
2.(ဆီးနှင်းပေါက်လဲ မိုးလောက်ပြင်းထန် သွန်းချပြန်သော် ယုဂန်ထင်ရှား)
ရေးသူ လက်ဝဲသုန္ဒရအမတ် မဲဇာတောင်ခြေ ရတု သက္ကရာဇ် 1125ခုနှစ်။
3.(နွေလသန်ပေါက် ယဉ်ချိန်ကယ်ရောက်ကာ မှနှင်းပေါက်ကယ်ရွှင်)
ရေးသူ ရွှေတိုက်စိုးဦးတိုးဘုန်းနှင့်ကံနှင့်ရွှေသဇင် သက္ကရာဇ် 1146ခုနှစ်။
ရေးသူ မဟာအတုလမင်းကြီး သက္ကရာဇ် 1181
5. (အိုနဒီတွင်းမှာလ နှင်းငွေ့ဆော် ချမ်းလို့တုန် မလုံအေးတယ်)
8.(နှင်းရည်သွန်းလို့ လေ၀န်းကဖိ ဘယ်နှယ့်သာချိပါမယ်)
9.(ငွေနှင်းလှိုင်စွာနှင့် မြိုင်မဟာနယ်ရှစ်က ပုံသစ်ဆင်)
10 ဆွတ်ဆွတ်သာသင်းတော့တယ် ၀တ်နှင်းရည်စိုလျှင်
11 ခွာညိုနွယ်ပန်း နှင်းတက်လမ်းမှာ မြပန်းသဇင်
အစရှိတဲ့ ဆောင်းဘွဲ့တွေမှာ ရှေးကတည်းက ဆီးနှင်းတို့ နှင်းတို့ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကို
အဲတော့ မိုးရွာသလို ရွာမယ် များများကျ မယ်ဆိုရင် ဆီး ဒါမှမဟုတ် ဆီးနှင်းလို့ သုံးတတ်ပြီး
မသဲမကွဲဖြစ်ရုံလောက်လေး ဆိုရင် နှင်းလို့သုံးမယ်။
ဆောင်းမဟုတ်တဲ့ ရာသီမှာကျရင် မြူလို့ သုံးတယ်ဆိုတာကို သွားတွေ့ရပါတယ်။
အချို့သောတောင်ပေါ်ဒေသတွေမှာ မိုးတ်ိမ်ခိုးတွေကို မိူင်းတိုက်တယ်လို့ သုံးတာကိုလဲသိရပါတယ်။
ဒီတော့ ကျနော်တို့ သုံးစွဲနေတဲ့ စကားလုံး နှင်းက snow နဲ့ မတူဘူးဆိုတဲ့ အချက်ကိုသွားတွေ့ပါတယ်။
ပထမဆုံးစပြီး အင်္ဂလိပ်ကနေမြန်မာကို ဘာသာပြန်ဆိုသူက
Snow ကို မြန်မာစကာလုံး နှင်းလို့ ဘာသာပြန်ခဲ့လို့ အခုလို ကွဲလွဲချက်တွေပေါ်လာရတာပါဘဲ။
ဥပမာပေးရရင်ဆာဒင်းဆိုတဲ့ငါးကို ငါးသလောက်ယောက်ဖလို့ ဘာသာပြန်ထားသလိုပေါ့
ဒီတော့ ကျနော်တို့ နားစွဲနေတဲ့ ခံစားနေတဲ့ နှင်းကို ဒီပြင်စကားလုံးနဲ့ အစားထိုးဘို့ကတော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
ဒီတော့ မြန်မာနှင်းနဲ့ ဥရောပ နှင်းမတူဘူးလို့ဘဲသဘောထားလိုက်ပါတော့ သူကြီးရေ။
ကိုပေါက်ရဲ့ အကြောင်းပြချက်က ခိုင်မာလို့ ထောက်ခံသွားပါသည်။
လေးပေါက်ရေ အရှေ့ဟာ အရှေ့ အနောက်ဟာ အနောက် ပါလို့ မက်တွိုင်းက ပြောသွားတာကို ရေးထားတဲ့ အကြောင်းစာအုပ်တအုပ်မှာ ဖတ်ဖူးပါတယ်
ရာသီတွေလည်း ထို့အတူပါပဲ အရှေ့ဆောင်းနဲ့ အနောက်ဆောင်းမတူတော့ တင်စားပုံခြင်း ခံစားပုံခြင်း ကွဲတတ်ပါတယ်… အခေါ်အဝေါ်လေးတွေရောပေါ့…
တချို့ ဒီမှာ သိပ်ပူတဲ့ ကာလမှာ တချို့ တိုင်းပြည်တွေမှာ သိပ်ကို နေလို့ ထိုင်လို့ ကောင်းတတ်ပါတယ်…
ဒီမှာ ချစ်တဲ့ ဆောင်းကို သူတို့ တိုင်းပြည်များ ဆီမှာ မုန်းလောက်အောင် အေးတတ်လို့ မနှစ်သက်တတ်ပါဘူး ….
ဥတုစံနှုန်းတွေကို အနောက်က ခံစားတာနဲ့ အရှေ့ရဲ့ နှိုင်းယှဉ်ခံစားမှုတွေ မတူတတ်ပါဘူး
အနောက်က စည်းကမ်းမှာ ဦးဆောင်နေတော့ သူတို့ လို ဖြစ်အောင် အရှေ့က ကျင့်ကြံနေထိုင်ရမှာ ဖြစ်ပေမဲ့
ရာသီကို စာစီရာမှာတော့ သူတို့ကို လိုက်တုလို့ မရပါဘူး…
ရာသီမှာတော့ အရှေ့ကို အရှေ့အတိုင်းပဲ ထားပြီး အနောက်ကို အနောက်အတိုင်းလေးပဲ ထားလိုက်ပါလို့
အော်…….. အဘယ်ကလေးမ များနာမယ်ပြောင်းချင်လို့လည်းလို့….။ ပြောင်းပေးလိုက်မလို့ဟာ….။
သူတို့ snow က မြန်မာရဲ့ နှင်း မှမဟုတ်တာ။
သူတို့ snow သတ်သတ် ။ မြန်မာ ပြောတဲ့ “ နှင်း ” ကသတ်သတ်ပဲ။
သူတို့ရဲ့ snow ကို မြန်မာလို နှင်းပွင့် လို့ခေါ်တာ(ရေးတာ)လဲတွေ့ဖူးတယ်။ နေဦး….. အောက်စဖိုဒ့် အကြောင်းရေးတာ ဘယ်သူလဲပဲ… ဆရာကြီးမင်းသုဝဏ်လား ထင်ရဲ့…။ အဲဒီထဲမှာ နှင်းပွင့်နှင်းဖတ်များ လို့စခေါ်တာတွေ့ဘူးတယ်ထင်တယ်။ သူငယ်ငယ်က တက္ကသိုလ် ကထိကဘ၀မှာရေးတာဆိုတော့ ကြာ..ကြာလှပြီ။ အဲဒါရဲ့ရှေ့မှာလဲ အနောက်တိုင်းကို ရည်ညွှန်းတဲ့ စာများမှာ နှင်းပွင့် လို့ ခေါ်ကြရေးကြပုံရပါတယ်။
မမရဲ့ပိုစ့်မှာထဲက ကျုပ် အတိအကျမရှာပြနိုင်လို့ အသာလေး ငြိမ်နေလိုက်တာ။
တကယ်က သူတို့ရဲ့ snow ကို ကျုပ်တို့အခေါ်သတ်သတ်ရှိပြီးသား။
ကျုပ်တို့ရဲ့“ နှင်း ”ကိုသာ သူတို့ ခေါ်စရာမရှိတာ။
မင်းဘယ်လို ဘဲ ပြောင်းလဲ သွားပါစေ
ငါ့ နဲ့ နှင်း ရဲ့ 
( တစ်ချိန်က ၂၀၀၁ ကွင်း နှင်း အတွက် )
မောင်ပေတော့ ဒီကဗျာရေးပြီး မိန်းမရိုက်တာ ခံရတော့မှာပဲ။
နှင်းဟုဆိုဆို မြူဟုဆိုဆို အငွေ့ရည်ဖွဲ့တယ်ဆိုဆို
ဒို့ …………………..ဒို့ စိတ်လှုပ်ရှားနေ
(သားထွေးရဲ့ နှင်း သီချင်းလေးပါ။ နှင်း ဆိုတာလေးက လှပါတယ်ဗျာ။ မလုပ်ကြပါနဲ့)
မြန်မာနိုင်ငံမှာ သူတို့နိုင်ငံလိုမျိုး နှင်းအဖတ်(snow)ကျလောက်အောင် မအေးတဲ့အတွက်ကြောင့် အရည်၊အငွေ့လောက်ပဲမြင်ကြရတာပါ။
အချက်အလက်တွေ ကောင်းလို့ ကော်ပီလိုက်တယ်နော်။
ကျနော်ဆိုလိုချင်တာက တော့ နှင်းဆိုတဲ့စကားလုံးက မြန်မာစကားလုံးစစ်စစ်။
မင်းပူးဆရာတော် ဦးဩဘာသရဲ့ မဟော်သဓာဇာတ်တော်မှာလည်း “ရေမဟုတ်သောရေ” ဟု ဆို၍
“ဆီးနှင်း” ကိုယူရာ၏ လို့ ဖတ်ဖူးကြောင်းပါခင်ဗျာ။
အမှတ်စဉ် (၂) လေးထပ်နေတာတွေ့လို့ ပြင်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျ။
ဒီအထဲမှာ ကော်ပီဆွဲပြီးဆော်လိုက်တာ ထပ်သွားတယ်။
ကော်နက်ရှင်ကောင်းရင် ပြန်ပြင်ပါမယ့် ဗျာ။
စာရိုက်တာချော်နေတာ တစ်နေရာ ပြန်ပြင်ပါမယ်။
ကျနော်ကလဲ နေ့လည်က တင်ချင်ဇောအားကြီးသွားတာကြောင့်လဲ
ဗေဒင်ဆရာတွေဟာ ဇာတာမသိ မွေးရက်မသိရင် ဆန်း နဲ့ဟောတယ်ဆိုပဲ။
ကျွန်တော်လဲ အချက်အလက်လဲမရှိ ဗဟုသုတလဲမရှိတော့ လော့ဂျစ်နဲ့ မန့် ဦးမယ်..။:)
အစကတည်းကရှိပြီးသားအရာတွေအတွက် မိခင်ဘာသာစကားနဲ့ အခေါ်အဝေါ်ရှိကြတယ်။
နေ ၊ လ ၊ ကြယ် ၊ တောင် ၊ မီး ၊ ရေ ၊ ငှက် ၊ သစ်ပင်
ဥပမာ – မ်ာတော်ကား ၊
ဥပမာ – သံကြိုးစာ
ပုဂံခေတ် ၊ ပျူခေတ်ကတည်းက မြန်မာပြည်မှာ ဖြူဖြူအမှုန်လေးတွေအနေနဲ့ ရှိနှင့်ပြီးသားလို့ ထင်ပါကြောင်း။
ဆောင်းရဲ့ရင်သွေး.. ဒီဇင်ဘာဖွားတွေ… စာလုံးအသစ်တွေ တီထွင်ဖို့တောင်းဆိုချင်တယ်..။
မြန်မာစာလုံးအသစ်ထွင်တာ.. ပရီနဲ့ပိုစ်ဝါး ကာလမှာပဲများပြီး နောက်ပိုင်း တော်တော်နည်းနေတာ သတိထားမိလို့ပါ..။
snow ကို.. နှင်းလို့လည်းမခေါ်…နှင်းခဲလို့လဲ မခေါ်ပဲ.. ပိုလှပြီး အနုပညာဆန်တဲ့.. မြန်မာစာလုံးအသစ်လေး ထွင်ရေးပေးကြပါလား…။
တတ်နိုင်ရင် ..တလုံးထဲနဲ့ သိသာစေတာ ဖြစ်စေချင်ပါတယ်..။
မြန်မာစကား..” နှင်းတွေကျနေတယ်”ဆိုတာ.. မြူနှင်းတွေကျနေတာဖြစ်ပြီး.. နယူးယောက်ကလိုSnow တွေ ဘုတ်ဘုတ်နဲ့..ကျနေတာကို ခေါ်တာမဟုတ်တာတော့ သိကြမှာပါနော..။
မြန်မာပြည်က..(မြောက်စွန်းဖျားကလွဲလို့)Snowမကျတော့.. အဲဒီစကားလုံး မတီထွင်တာထင်တယ်..။
တကယ်တော့… ရေခဲခြစ်..ရေခဲသုတ်ထဲက.. ရေခဲတုံးကို.. ခြစ်လိုက်ရင်.. ထွက်လာတဲ့ရေခဲခြစ်မှုန်ဟာ..Snow နဲ့တော်တော်တူပါတယ်..။
အောက်မှာ.. အင်္ဂလိပ်လို.. စာလုံးတွေရေးပေးထားတယ်..။
တလက်စထဲ..ဘာသာပြန်ပြီး မြန်မာစာလုံးလှလှလေး(တိုတိုလေး)တွေ..ထွင် ရေးကြည့်ပါလား…။
ကိုပေါက်လို.. သီချင်းစာသားတွေမှတ်မိသူတွေ…. ရှေးကဗျာ အဖတ်များသူတွေ.. သက္ကဋ၊ ပါဠိ၊ ကျွမ်းသူတွေလည်း ကူပေးစေချင်ပါတယ်နော..။
“တန်ဆောင်မုန်းလသည် ဆီးနှင်း၊ မြူ၊ တိမ်၊ သူရိန်၊ မီးခိုးဟူသော ညစ်မျိုး(၅)ပါး ကင်းစင်၍ရာသီဥတုသည် အလွန်အေးမြကြည်လင်သော လပင်ဖြစ်သည်။ ”
“စိန္ဒိမာ = ဆီးနှင်း မြူ တိမ် သူရိန် မီးခိုး ညစ်မျိုးကင်းမဲ့ စိမ်းလဲ့လျှံခြယ် ရောင်ခြည်ကယ်၍ ရှုဖွယ်မခန်း သော်တာစန်းသည်။” ဆိုတာမျိုးရှိတယ်..။
ဆီးနှင်း၊ မြူ၊ တိမ်၊ သူရိန်၊ မီးခိုး ကို.. အကားအဆီးဖြစ်စေတဲ့..ညစ်မျိုးတွေလို့ သတ်မှတ်ပုံရပါတယ်..။
snow: နှင်းaprecipitation in the form of ice crystals, mainly of intricately branched, hexagonal form and often agglomerated into snowflakes, formed directly from the freezing of the water vapor in the air.
rain: မိုး water that is condensed from the aqueous vapor in the atmosphere and falls to earth in drops more than 1/50 in. (0.5 mm) in diameter.
fog: မြူacloud-like mass or layer of minute water droplets or ice crystals near the surface of the earth, appreciably reducing visibility.
mist: မြူတိမ်?acloud-like aggregation of minute globules of water suspended in the atmosphere at or near the earth’s surface, reducing visibility toalesser degree than fog.
smog: မြူခိုး? smoke or other atmospheric pollutants combined with fog in an unhealthy or irritating mixture.
hail: မိုးသီး showery precipitation in the form of irregular pellets or balls of ice more than 1/5 in. (5 mm) in diameter, falling fromacumulonimbus cloud.
sleet: နှင်းခါးမိုး? precipitation in the form of ice pellets created by the freezing of rain as it falls.
Drizzle (also called mizzle) မိုးငွေ့ : is light precipitation consisting of liquid water drops smaller than those of rain, and generally smaller than 0.5 mm (0.02 in.) in diameter. Drizzle is normally produced by low stratiform clouds and stratocumulus clouds. Precipitation rates due to drizzle are on the order ofamillimeter per day or less at the ground. Owing to the small size of drizzle drops, under many circumstances drizzle largely evaporates before reaching the surface, and so may be undetected by observers on the ground. The METAR code for drizzle is DZ.
ပြင်ဖို့.. တိုက်တွန်းတောင်းဆိုတာ မဟုတ်ရပါဘူးနော…။
မြန်မာပြည်ဟာ..အရှေ့တောင်အာရှ(အာစီယံ)ရဲ့.. တခုတည်းသော.. စနိုး( Snow) ကျတဲ့နိုင်ငံပါ..။
ကိုယ့်နိုင်ငံမြောက်စွန်းဖျား.. တောင်တန်းတွေမှာ.. စနိုးတဖုတ်ဖုတ်… ကျနေတာကို.. မသိသားနိုင်ခဲ့တဲ့..ရှေးလူကြီးတွေ.. အမည်ပေးဖို့ကျန်ရစ်ခဲ့တာတခုလို့ ယူဆမိပါတယ်..။
ဒါကို.. ကမ္ဘာရွာခေတ်မှာ.. မြန်မာဆန်ဆန်..စာလုံးအသစ်လေးဖြည့်ပေးရင်း.. သမိုင်းပေးတာဝန်ထမ်းဆောင်တယ်မှတ်ကြပါခင်ဗျ…
ကိုယ့်တိုင်းပြည်စနိုးကျနေတာမို့.. အာစီယံနိုင်ငံတွေက.. နှင်းလျှောစီးလာကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်း.. တိုးရစ်ဇင်လည်း.. ပရိုမိုးရှင်းလုပ်တဲ့သဘောပါပဲ..။
အပေါ်ကဦးဦးပါလေရာကြီးရဲ့.. ကိုးကားချက်.. နှင်းပွင့်ဆိုတာလေးကြိုက်မိပါရဲ့..။
နှင်းကို.. အနုစိတ်မှန်ဘီလူးနဲ့ကြည့်ရင့်.. ပန်းပွင့်လို.. ပုံဆောင်ခဲအဖြစ်မြင်ရတာကိုး..
စနိုး(Snow)ကို.. နှင်းပွင့်အဖြစ် အဆိုတင်သွင်းပါတယ်.. လို့..။
သိဖူးတာကလည်း.. နှင်းပွင့်တွေအမြဲပြိုကျနေတဲ့တောင် ဆိုလားပဲ..(မသေချာ)
ဒေသတိုင်းရင်းသားတွေဂုဏ်ပြုပြီး.. ဒေသစွဲနာမယ်ကို. တပြည်လုံးလိုက်သုံးပေးလိုက်လည်းဖြစ်တာပါပဲ..။
(သဂျီးရေ့ ….ခညားဘက်မှာ ရွာ့ချဉ်ဘတ် တကောင်ပဲ ၇ှိတာဂျ …အာဟိ…)
ထွင်ရေးပေးဦးမှာ …. သဂျီးအတွက် နှင်းအတွက်….
နောက်တာပါဗျာ …နှင်းပွင့် ဆိုတဲ့ keyword လေးထွက်လာတဲ့အတွက်…
အထင် အမှတ်များ မှားသလား ဆိုတဲ့ သဂျီး ပြောတဲ့စကားလေးအတွက် …ပါ
သဂျီးပြောတဲ့ တဘတ်ဘတ် က snowflake- နှင်းပွင့် …. လို့ခံစားရပြီး…
ဗမာ စာဆိုကျော်ကြီးတွေ တင်စားခဲ့တဲ့ …မြူနှင်း နဲ့ မတူဘူး လို့ ခံစားမိ ခံယူမိပါကြောင်း…
နှင်း လို့ only နှင်း …. သုံးရင်တော့ …မေးရိုက်အောင် အေးတဲ့နှင်းလား …ကြက်သီးထရုံလောက်
ချမ်းတဲ့နှင်းလား မကွဲပြားတာမို့ ……
ကြုံလို့ ရွတ်ပြရရင် အဟမ်း ….
ခန်းဆောင်ရွှေ ရဝေ တွင်းမှာလ …
blah blah ရယ်နှင့် blah blah blah ….
အတိဿယ၀ုတ္တိက နေရာတိုင်းတော့ မကောင်းဘူးဗျ….
နှောင်းလူတွေ နည်းနည်း အမှတ်မှားစေသလိုဘဲ
ရည်ရွယ်ရင်းကတော့ ရှိမပေါ့ဗျာ …..သို့သော် အနှီရည်ရွယ်ရင်း
current context က ကျော်ပြီး ပျက်ပြီး သွားပြီးသကာလ …
စကားလုံးတွေဘဲ ပေထက် အက္ခရာ တင်ကျန်ခဲ့လေတော့ ……
အနှီကဗျာမှာ …ကနောင်မင်းသားကြီး ဗမာ့စက်ရုံများ လည်ပတ်စေရေး
အတွက် ဆောင်းတွင်းမှာပင် မချမ်းအား တူနှင့်တံစဉ်(ကွန်မြူနစ်ကို မရည်ညွှန်းပါ)
ကိုင်ကာ နိုင်ငံအတွက် လုံ့လပြုခဲ့သည်ကို သွယ်ဝိုက် ရည်ညွှန်းခဲ့သည် ဟု ယူဆရပါသည်…
သို့သော် …မန္တလေး ဆောင်းအား …snow flakes များ ကျလေသယောင် အတိသယ၀ုတ္တိ
ဖြင့် ဖွဲ့ထားပါသည်. .ချင့်ယူစေချင်သည်
နှင်းပွင့် ဆိုတဲ့စကားလုံးကို ကြိုက်ပါတယ်ဗျာ။
ငယ်ငယ်က မနှင်းဖြူ ပုံပြင်နားထောင်ရင်း
နှင်းပွင့် Vs နှင်းကလေး
ဒို့ တိုင်းပြည်က နှင်းကလေးပဲ ကြိုက်တယ်။ သူများတိုင်းပြည်ကို ခဏပဲ သွားဆော့တာ ကြိုက်တယ်။
ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ အရမ်းချမ်းမှာ စိုးလို့။
ခေါင်မိုး မိုးထားဒါ ပြောလို့ရဒါဟုတ်ဝူး မတော်နေမိုးပျိုမှဖြင့်
အမှန်ကတော့ ဒါဟာ ရေသံသရာလည်ခြင်းတစ်မျိုးဆိုတာ အားလုံးသိကြမှာပေါ့နော
အပေါ်ကနေ စပြီးကျလာတာက စနိုးတွေလေ
စနိုးတွေက မြေပြင်ပေါ်ကို ရောက်ပြီး အရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတာကို
တစ်ကယ်ဆို ဒါကလည်း မိုးရွာခြင်းတစ်မျိုးဘဲ ဟုတ်ဘူးလား
ရွှံ့ နဲ့ ဗွက်
ထိုကိစ္စ အတွက် ပထမဆုံးမြင်မိသည်မှာ
“ နွားမ ရွှံ့ ပိတ် ” ဆိုသည်ကို ဖြစ်သည် ။
ထိုနေရာ တွင် ဗွက်ပါ ပိတ်လို့ ရမရ ဆိုတာ စဉ်းစားပေးပါ ဦးဘဇင်း
အဲ…. တား လောက်စာလုံးဖို့ ခူးထားတဲ့ ရွှံ့ ဒွေ … အဒူ ယူ ကျီး နမ ဖင် သွားပိတ်နေတာလဲ ကျန်ပေး….။ ရ၀ူး ရ၀ူး ………..။
သူကြီးကို သကြား၊ သဂျီးကို သဂျားလို့ ပြောင်းခေါ်ယအောင်ဗျာ။။။။
နှင်းကို.. နှင်းပွင့်လို့ဆက်၍ခေါ်မည် နှင်း…။
မနေ့က ရေးတဲ့ ပို့စ်မယ် . . customer တို့ complaint တို့ကို မြန်မာလိုရေးဖို့ အတော်လေးခေါင်းပူအောင် စဉ်းစားလိုက်ရတယ် . . .
ကပ်စတန်မာ ကို ဖောက်သယ်
ကျနော်ကတော့… သူကြီးသူမီး နှင်းမှုန် ကို ပိုသဘောကျတယ်.. ။
ညနေ ရေခပ်ဆင်းချိန်ဆို..နှင်းမှုန်လေး..ရေအိုးရွက်ပြီး လမ်းလျှောက်တာ.. သိပ်လှ..
နှင်း ဆိုတဲ့ တစ်လုံးတည်းသော ပညတ်သဘောမှာတင်
လှပသော ……… ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်တွေ အပြည့်ပါနေတာမို့
အဲဒီစကားလုံးတစ်လုံးထဲထက်ပိုပြီး ပေါ်လွင်အောင် ဖော်ပြဖို့လည်း မဖြစ်နိုင်၊
အဲသဟာကြောင့် နာမည်မပြောင်းချင်ပါနဲ့တော့ သဂျီးရေ။
ထပ်ပြီး ဖြည့်စွက်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ………….